Haddii Aan Xataa Badal Afraad Haysan Lahaa Isaga Maan Soo Galiyeen-Zinedine Zidane Oo Si Wayn Uga Aarsaday Gareth Bale - Gool24.Net
Haddii Aan Xataa Badal Afraad Haysan Lahaa Isaga Maan Soo Galiyeen-Zinedine Zidane Oo Si Wayn Uga Aarsaday Gareth Bale
Gareth Bale waxa uu ahaa shaqsigii shaqada Real Madrid ka galaaftay Carlo Ancelotti isla markaana sababta buuxa u ahaa in Zidane uu shaqada Madrid iska casilay.
Laakiin Zidane ayaa markiisa si buuxda uga aarsaday xidiga reer Wales isaga oo xataa kulankii xili ciyaareedkan ugu danbeeyay ka hor joogsaday in uu macalasalaamayn fiican sameeyo.
Xidhiidhka Gareth Bale iyo Zinedine Zidane ayaa gabi ahaanba burburay intii aanu xili ciyaareedkii la soo dhaafay Zidane iska casilin shaqada Madrid waxaana la ogaa cadhadii uu Bale ka sheegay kadib finalkii Champions League ee 2018 kii.
Laakiin markii ay Real Madrid fashil ka bixi wayday ee uu Perez dib u soo celiyay Zidane waxaa la sii ogaa in qofka ugu horeeya ee dhibanaha u noqonaya Zidane uu ahaa Bale laakiin xaalada ayaaba ka sii fogaatay wixii laga filayay.
Tan iyo markii uu Zidane ku soo laabtay Madrid waxa uu Bale siiyay saddex kulan oo kaliya oo uu dhamaystay balse waxa uu kadib bilaabay in uu liiska kooxdiisa ka saaro dhawr kulan isaga oo muujiyay in Bale aanu boos ku lahayn qorshihiisa.
Laakiin wixii dhacay kulankii maanta ee Real Betis waxa uu noqon doonaa mid aanu Gareth Bale waligii ilaawi doonin haddii uu ciyaaray kulankiisii ugu danbeeyay Madrid oo uu xagaagan baxayo waxaana la barbar dhigi karaa murugadii uu Ikar Casillas kaga baxay Bernabeu.
Zinedine Zidane ayaa Gareth Bale ka horjoogsaday in uu ku soo bilawdo kulankii Real Betis ee ay Madrid ceebtu ka soo gaadhay si uu u macasalaameeyo jamaahiirta kooxdiisa maadaama oo loo arkayay in ay ahayd fursadiisii ugu danbaysay ee uu Madrid ugu ciyaaro.
Kulankii Real Betis waxa uu Zidane kaydka ku hayay Gareth Bale isaga oo saddexdiisii badalka ahaa ka dhigtay Marco Asensio, Isco iyo Lucas Vázquez, waxaana la filayaa in waayihii ciyaareed ee Bale uu ku lahaa Madrid uu kursiga kaydka ku soo dhamaaday.
Laakiin hadal uu Zidane sheegay kadib kulankii Real Betis ayaa ah mid sidan u dhigan: “Haddii aan haysan lahaa badal afraad, anigu isaga maan soo galiyeen” waana fariintii ugu danbaysay ee uu Bale u diray si uu quus buuxda u qaato.
Arinta uu Zidane sameeyay ayaa loo arkaa mid aargudasho buuxda ku ah Gareth Bale oo hore madax wayne Perez kalsooni badan uga heli jiray si uu culays u saaro Zidane iyo macalinkii ka horeeyay ee Ancelotti.
Laakiin hadda Bale ayaa murugo ku dhamaysanaya waayihiisii ciyaareed ee Madrid, mana heli doono fursad uu ku ciyaaro kulan kale oo macasalaamayn ah.
Muxuu Yahay Go’aanka Layaabka Ah Ee Uu Gareth Bale U Sheegay Ciyaartoyda Kooxdiisa Madrid?
Laakiin arin lama filaan ah ayaa ka soo baxday xaalada Gareth Bale isaga oo ciyaartoyda kooxdiisa Madrid ku wargaliyay waxa uu samayn doono kadib waji gaba uu Zidane kala kulmay.
Wargayska AS ee Madrid ka soo baxa ayaa shaaciyay in Gareth Bale uu ciyaartoyda kooxdiisa Real Madrid u sheegay in haddii uu waayo koox uu ka qaato mushaarka 17 ka milyan ah in uu Real Madrid iska sii joogi doono isla markaana uu ciyaari doono Golf-ka.
Ciyaartoyda Real Madrid ayaa hore u soo bandhigay in Gareth Bale uu ku waalan yahay ciyaarta Golf-ka, wuxuuna u sheegay xidigaha Madrid in aanu bixi doonin haddii aanu helayn isla mushaarka uu Madrid ka qaato.
Arintan ayaa ah mid uu Bale ku cadaadin karo Madrid si uu kooxda iskaga sii joogo isaga oo og in aanu Zidane wax waji ah u hayn isla markaana aanu qorshihiisa ka mid ahayn, waana arin laga yaabo in uu ku doonayo sidii uu maamulka kooxda culays ugu saari lahaa.
Arintan ayaa ah mid keeni karta in maamulka Madrid iyo Zidane markale isku khilaafi karaan, iyada oo ayna suurtogal ahayn in uu Bale kooxda ka qaato mushaar 17 milyan ah isaga oo aan u ciyaarayn, balse waxa uu hadda u muuqdaa mid waayihiisii ciyaareed ka door bidaya in uu mushaar fadhiga ku qaato.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo xili ciyaareedkii Madrid ee musiibada ahaa uu soo dhamaaday,waxa uu hadda Zidane toos u bilaabi doonaa diyaarinta qorshaha xili ciyaareedka cusub oo suuqu ugu muhiimsan yahay.